Idi China FK616 Semi akpaaka 360 ° Rolling Labeling Machine factory na suppliers |Fineco
③ FK616 nwere ọrụ ndị ọzọ na-abawanye: koodu nhazi ngwa nbipute ma ọ bụ ngwa nbipute ink-jet, mgbe ị na-ede aha, bipụta nọmba ogbe mmepụta doro anya, ụbọchị mmepụta, ụbọchị dị irè na ozi ndị ọzọ, koodu na labeling ga-arụ n'otu oge, melite arụmọrụ.
④ FK616 1.Adjust usoro dị mfe ma na-achọ naanị ịkwaga elu nke wheel nrụgide.2.gbanwee ọnọdụ ebu nke ngwaahịa ịpị na ọnọdụ nke ihe mmetụta.Usoro Gbanwee bụ ihe na-erughị nkeji 10. Ịkọpụta aha ziri ezi dị elu, na njehie na-esi ike ịhụ anya na anya.Ọ bụ nhọrọ dị mma maka ngwaahịa ndị nwere obere mmepụta ihe.
⑤ FK616 mbara ala gbasara 0.56 stere.
⑥ Nkwado igwe nhazi.
Pịa mgba ọkụ ka etinyechara ngwaahịa ahụ n'ọnọdụ ahaziri.
Igwe ahụ ga-amachi ngwaahịa ahụ wee wepụ akara ahụ, wiil nke dị n'elu igwe ga-pịa akara ahụ na ngwaahịa ahụ wee tụgharịa ruo mgbe akara ahụ gwụchara.
Hapụ ngwaahịa na igwe ga-eweghachi akpaka.
Emechala usoro nnye aha.
Nkọwapụta akara ihe mmado, transperent ma ọ bụ opaque
Ịkpọ aha ndidi ±mm
Ike (pcs/niin) 100 ~ 300
Nha karama suit (mni) 010 ~ 030; Enwere ike ịhazi ya
Nha akara suit (mm) L: 20-290; W (H): 20-130
Igwe Sizc (L*W*H) ^ 2100*720*1450 (mm)
Nha ngwugwu(L*W*H) ^2010*750*1730 (mm)
Akwụkwọ mpịakọta ID: 076mm; OD: <26Omm
Mba. Nhazi Ọrụ
1 Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ Tinye akwụkwọ mpịakọta
2 Rollers Ikuku mpịakọta labelụ
3 Ihe mmetụta akara Chọpụta akara
4 Silinder na-ewusi ike Gbanye ngwaọrụ ike
5 Ngwaọrụ na-ewusi ike Mpempe akwụkwọ dị nro ka ị na-ede aha ma mee ka ọ kwụsie ike
6 Ngwa ngwa ngwa Emebere nke ọma, dozie ngwaahịa site na elu na ala mgbe ị na-ede aha
7 Moto Fixture Gbanye ngwa ngwa ka ọ tụgharịa mgbe ị na-ede aha
8 Silinder na-edozi Gbanye ihe nkwụnye ahụ
9 Ngwaọrụ traction Moto traction na-anya ya iji see akara
10 Hapụ imegharị akwụkwọ Megharịa akwụkwọ ntọhapụ
11 Nkwụsị ihe mberede Kwụsị igwe ma ọ bụrụ na ọ na-aga nke ọma
12 Igbe eletrik Debe nhazi eletrọnịkị
13 Ihuenyo mmetụ aka Ọrụ na ntọala paramita
14 Ihe nzacha sekit ikuku Fichaa mmiri na adịghị ọcha
Ajụjụ: Ị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe?
A: Anyị na-emepụta dị na Dongguan, China.Specialized na labeling igwe na nkwakọ ngwaahịa maka ihe karịrị 10 afọ, nwere ọtụtụ puku ndị ahịa ikpe, welcome maka factory nnyocha.
Ajụjụ: Kedu ka ị ga-esi jide n'aka na njirimara akara gị dị mma?
A: Anyị na-eji ike na inogide n'ibu etiti na adịchaghị electronic akụkụ dị ka Panasonic, Datasensor, ọrịa ... iji jide n'aka ike labeling arụmọrụ. Gịnị bụ ihe ọzọ, anyị labelers kwadoro CE na ISO 9001 asambodo na nwere patent certificates.E wezụga, Fineco Enyere Chinese "New High-Tech Enterprise" na 2017.
Ajụjụ: Igwe igwe ole ụlọ ọrụ gị nwere?
A: Anyị na-emepụta ọkọlọtọ na nke a na-eme ka a na-eji aha na-edebanye aha na-emepụta ihe na-emepụta ihe.Site na ọkwa automation, e nwere ndị na-edepụta aha na-akpaghị aka na akpaaka akpaaka; Site na ụdị ngwaahịa, e nwere ndị na-edepụta ngwaahịa gburugburu, ndị na-edepụta ihe ndị na-emepụta ihe, ndị na-edepụta ihe ndị na-emepụta ihe, ndị na-emepụta ihe na-adịghị mma, na ihe ndị ọzọ. Gosi anyị. ngwaahịa gị, a ga-enye ngwọta ntinye aha ya.
Ajụjụ: Gịnị bụ okwu mmesi obi ike gị?
Fineco mejuputa ọrụ nke post ahụ,
1) Mgbe ị kwadoro iwu, ngalaba imewe ga-ezipụ nhazi ikpeazụ maka nkwenye gị tupu mmepụta.
2) Onye mmebe ahụ ga-agbaso ngalaba nhazi iji hụ na a na-edozi akụkụ ọ bụla n'ibu n'ụzọ ziri ezi na n'oge.
3) Mgbe emechara akụkụ niile, onye nrụpụta na-ebufe ọrụ na Dept Assembly, nke kwesịrị ikpokọta akụrụngwa n'oge.
4) Ọrụ na-ebufe na Dept Adjustment na igwe a na-agbakọta. Ahịa ga-elele ọganihu na nzaghachi nye ndị ahịa.
5) Mgbe ndị ahịa si video ịlele / factory nnyocha, ahịa ga-ahazi nnyefe.
6) Ọ bụrụ na ndị ahịa nwere nsogbu n'oge ngwa, Sales ga-ajụ mgbe-sales Dept dozie ya ọnụ.
Ajụjụ: Ụkpụrụ nzuzo
A: Anyị ga-edobe atụmatụ nke ndị ahịa anyị niile, Logo na Sample na ebe nchekwa anyị, na-egosighikwa ndị ahịa yiri ya.
Ajụjụ: Enwere ntụziaka nwụnye mgbe anyị natara igwe?
A: N'ozuzu, ị nwere ike itinye labeler ozugbo nata ya, n'ihi na anyị edozila ya nke ọma na ihe nlele gị ma ọ bụ ngwaahịa ndị yiri ya. E wezụga akwụkwọ ntuziaka na vidiyo ga-enye.
Ajụjụ: Kedu ihe labelụ igwe gị na-eji?
A: Ihe mmado na-ejide onwe ya.
Ajụjụ: Kedu ụdị igwe nwere ike imezu ihe achọrọ m label?
A: Pls na-ebunye ngwaahịa gị yana nha akara (onyinyo nke ihe nlele akara na-enye aka), mgbe ahụ, a ga-atụ aro azịza nrịbama dabara adaba.
Ajụjụ: Enwere mkpuchi ọ bụla iji kwe nkwa na m ga-enweta igwe kwesịrị ekwesị m na-akwụ maka ya?
A: Anyị bụ ndị na-ebubata ego na saịtị si Alibaba.Nkwenye azụmaahịa na-enye nchekwa dị mma, nchebe mbupu n'oge yana nchebe ịkwụ ụgwọ 100%.
Ajụjụ: Kedu ka m ga-esi nweta ihe nchekwa igwe?
A: A ga-eziga ihe nchekwa na-abụghị nke arụrụ arụ ọrụ n'efu na mbupu n'efu n'oge akwụkwọ ikike afọ 1.
Nke gara aga: FK807 Automatic Horizontal Round Labeling Machine
Osote: FK616A Semi Automatic karama gbara okpukpu abụọ Sealant Labeling Machine
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ igwe mkpuchi mkpuchi zuru oke
Igwe na-edobe karama Flat
igwe ewepụghị karama mkpuchi mkpuchi zuru oke igwe
igwe mkpuchi mkpuchi karama iko iko
Igwe akara karama hexagon
Plastic flat bottle full cover labeling machine
Igwe eji akara karama ewepụghị plastị
igwe mkpuchi mkpuchi karama plastik square
Igwe na-ede akwụkwọ mpempe akwụkwọ Semi Automatic Square
igwe mkpuchi mkpuchi karama square
karama square igwe mkpuchi mkpuchi zuru oke
Igwe eji akara karama Square
FK616A Semi akpaaka abụọ-barrelled karama S ...
FK617 Semi akpaka ụgbọ elu Rolling Labeling Mac...
FK816 Akpaaka Ugboro abụọ isi nkuku akara akara...
FK912 Igwe nrụbama akụkụ akpaaka